Barnaamijka Taariikhda Dunida Oo Aan Maanta Ku Soo Qaadan Doono Noloshii “Bill Gates”.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: April 11, 2016, 6:33 pm
Barnaamijka Taariikhda dunida isbuuciiba hal mar ayaan soo qaadan doonaa anagoo ku soo qaadan doono shaqsi dunida caanka ah taariikhdiisa oo dhameystiran hadee EEBE idmo.
Dhammaadkii bisha June ee sannadkan 2006, ayey kaga ekayd Billgate Guddoomiye inuu ka sii ahaado shirkadda MICRO SOFT oo muddo 20-sannadood gacanta ku hayey.
Billgates iyo xaaskiisa Milenda, waxay jeclaysteen inay u faaruqaan Hay’ad samo-fal labadoodu aasaaseen oo wax u qabata dad sabool ah oo daafaha dunida ku nool, ninka ugu hodansan caalamka indheer-garadka iyo Super Man-ka casrigan loo yaqaan.
Billgates, macallimiintii wax u dhigi jirtay wuxu ku odhan jiray, markuu gaadhay da’da 30-jir, waxaan noqon doonaa shaqsi hodan ah.” Macallimiintiisii qaar ka mid ah ayaa mar dambe arrintaasi markuu ka dhabeeyay la yaabay ee uu gaadhay 31 jir.
William Henry Gates, oo ku can-baxay Billgates waxa uu ku dhashay magaalo ku taalla Washington 28 October 1955-kii, hooyadii waxay maamule ka ahayd hay’ad loogu magac-daray, UNITED WAY INTERNATIONAL, aabbihiina waxa uu u ahaa garyaqaan, waxaana la dhashay laba hablood.
Bill, marka hore waxa uu galay dugsiyada Xukuumiga ah illaa fasalka afaraad, kadib aabbihii waxa uu geeyay iskuullada gaarka loo yaqaan oo uu ku dhammaystay dugsigiisa dhexe.
Bill, mawhibaddiisa iyo maskaxdiisa wanaagasan waxay soo shaac baxday 13-jirkiisii, kadib markuu ku talax-tegay ku shaqeynta barnaamijyada kala duwan ee Computer-ada. Billgate, kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Harvard University oo ka mid ah jaamacadaha Maraykanka ugu magac weyn 1973. ha yeeshee saddex sanno kadib, isaga oo waxbarashadiisii aan dhammeysan ayuu ka tagay.
Gates, intuu ku sugnaa jaamacadda Harvard wuxu soo kordhiyey borograamka Basic loo yaqaan, kadib wuxu ku laabtay magaaladii uu ku dhashay oo ah Katirsan Washington.
Gates, magaaladii uu ku dhashay markuu dib ugu laabtay waxa uu la kulmay Paul Allen oo meel ay ku wada ciyaari jireen markii ay yaraayeen, kadib waxa ay aasaaseen badhtamihii 1970-kii, shirkad barnaamijyada Computer-ada soo saarta.
Billgates, waxa uu guursaday Melinda oo maamule ka ahayd dhawr barnaamij oo shirkadda MICRO SOFT soo saarta, iyadoo u dhashay laba hablood iyo wiil.
1975-kii Billgate iyo saaxiibkii Alen waxay aasaaseen shirkadda Microsoft. Shirkaddan oo noqotay ta keliya ee gacanta ku dhigtay suuqa combiyuutarada dunida, kadib markii ay soo saareen barnaamijka ay ugu magac-dareen ‘Daaqadaha’ (Windows), oo ah barnaamij aad u fududeeya adeegsiga aaladda kombiyuutarka.
Ugu dambayn Kombiyuutarka ay shirkadda Microsoft soo saartaa waxa uu noqday mid guri kasta oo Maraykanka iyo dalalka kale ee dunidaba laga helo. Barnaamijka Windows- waxa uu noqday mid aan laga waayin kombiyuutarada.
MICROSOFT IYO GOOGLE
Billgates si joogto ah waxa uu diiradda ugu hayaa guulaha ay ka gaadhay shirkadda GOOGLE. Waa shirkad ku dhaqaaqday in jebiso Microsoft iyo muddadii ay suuqa haysatay. Khilaafka iyo tartanka Microsoft waxa uu bilowday, kadib markii shirkadda GOOGLE ay madax ka dhigtay, gaar ahaan qaybteeda ku taalla dalka Shiinaha shaqsi hore madax uga ahaa qaybaha fulinta ee shirkadda Microsoft.
Inkasta oo Billgate uu markii hore ka cadhooday arrintaas, gaar ahaan markii ay shirkadda GOOGLE jebisay xeerarka loolanka shirkadaha, haddana waxa uu sheegay in ay maalmuhu kala saari doonaan GOOGLE iyo Microsoft midka wanaagsan.
Billgate waa shaqsi maskax badan, isla markaana naxariis badan. Waxa uu qoray laba buug oo uu ugu magac-daray ‘Business and the speed of thoughs’ iyo buug kale oo uu u bixiyey ‘The Road a Head,’ kaas oo uu qoray sannadkii 1995-kii waxa lagu tarjumay 25 luqadood.
Billgate labaatan sannadood kadib waxa uu jeclaystay isaga iyo gabadhiisa Milenda in ay u gacan bannaanaadaan arrimaha samofalka, kadib markii ay aasaaseen hay’ad samofal oo lagu magacaabo ‘Bill and Milenda Gates Foundation.’ Billgate mashaariicda samofalka uu wax ka bixiyo waxa mid ah malaayiin lacag ah oo uu ku bixiyo la-dagaalanka cudurka HIV/AIDS-ka, gaar ahaan afar milyan qof oo xanuunkan qaba, kuna nool dalka Hindiya. Sida oo kale, Billgate qaaradaha Aasiya iyo Afrika ayuu kala qaybqaataa ka-hortagga cudurkan.
Billgate iyo xaaskiisa Milenda waxa ay hay’adda caafimaadka adduunka ugu deeqeen 750 milyan doollarka Maraykanka ah, kaas oo loogu talogalay ka-hortagga iyo tallaalka cudurrada faafa. Waxa kale oo 168 milyan oo dollar ku bixiyey ka-hortagga cudurka Duumada [Kaneecada]. Cudurkan oo ay sannad kasta u dhintaan in ka badan hal milyan oo qof gudaha Afrika.
Billgate iyo Milenda waxa kale oo ay 200 milyan ugu yabooheen culimo baadhayaal ah oo daraasad ku sameeya sidii loo yarayn lahaa saboolnimada. Sida oo kale, waxa ay ballanqaadeen caalim kasta oo dunida wax ku soo kordhiya in ay dhiirigeliyaan uguna yaboohayaan 20 milyan oo dollar.
Hantida Billgate sannadkii tegay waxay gaadhay 46 bilyan oo dollar, laba iyo tobankii sannadood ee u dambeeyeyna isaga ayaa ahaa shaqsiga caalamka ugu hodansan. Billgate tan iyo sannadkii 1975-kii, waxa uu shaqaynayey 14 saacadood, iyada oo la sheegay in uu saacad kasta faa’iidi jiray hal milyan oo dollar.
Billgate waxqabadkiisa dhinaca caafimaadka iyo samofalka waxa u dheer hay’ad uu ugu magac-daray ‘Gates Learning Foundation,’ taas oo uu ugu talogalay in ay dadka wax u kordhiso. Billgate waa shaqsi dunida wax ku soo kordhiyey, geeridiisa ka dibna raad ka tegi doona.
La Soco Taariikhda Shaqsiga Xigo Iyo Kobciye.com